Imikhuba Yabathengi Esekelwe Ebulili | Martech Zone
Imikhuba Yabathengi Esuselwe Ebulilini
NgoMsombuluko, Mashi 5, 2012 Douglas Karr
Abantu abaku G+ bahlanganise i-infographic ukuhlinzeka ngamanye ama-nuances maqondana ne- imikhuba yabathengi eqondene nobulili.
Ngisho nasendaweni yanamuhla yezitolo eqhutshwa yiwebhu, isisho esidala sokuthi abesifazane bathanda ukuthenga kakhulu kunamadoda sisasebenza. Kokubili okuku-inthanethi noma okucishiwe, abesifazane bahlala benza izinqumo zokuthenga ezithe xaxa futhi ngokuvamile bazisa ulwazi lokuthenga ngaphezu kwabalingani babo besilisa. Abathengisi abakhaliphile bayazi ukuthi kufanele bahlele imiyalezo yabo kumakhasimende abo, ngakho-ke namuhla sihlola izindlela ezihlukile zabathengi besilisa nabesifazane nokuthi ezinye izinkampani zizisebenzisa kanjani.
Tags: umthengiimikhuba yabathengiizitayela zabathengiOwesifazaneubuliliukuziphatha kokuthengwa kobuliliizinqumo zokuthengwa kobuliliizitayela zobuliliwesilisa
Ukuqasha: Imakethe ye-Piracy Online
Ukuhlolwa Kwewebhusayithi Ngaphandle Kwekhasi Lokufika